Neuropsychological kuongororwa uye kutaura Therapy Ongororo (zera rekuvandudza) | Kudzidziswa Kwekuziva
Neuropsychological diagnostic uye kutaura kwehutano hwekuongorora (kukura kwezera)
Ndianiko uyu: Vana nevayaruka vane matambudziko echikoro
Zvinotora nguva yakareba sei: Mazuva matatu anenge
Zvakawanda sei: 384 €
Izvo zvinopera: Chirevo chekupedzisira uye chirwere chinowanikwa (DSA)
Iko kuongorora kunoitika: Via Ugo Bassi, 10 (Bologna)
Nzira yekutibata nesu: 392 015 3949
Iyi nzira yenzira inonyanya kukodzera kune akawanda marudzi ezvinhu. Semuenzaniso, kana munhu achinetsekana nekuramba akatarisa, kubata nemusoro ruzivo nemaitiro (zvinyorwa zvinodzidzwa, matafura, maitiro ekuverenga ...), kuratidza pfungwa, kunyatsoverenga uye kunzwisisa ruzivo rwakanyorwa uye rwemuromo.
Mune mamwe mamiriro ezvinhu, kusahadzika kune chekuita nekuti mwana kana wechidiki ane hunyanzvi hwakanyanya kupfuura hwakajairwa uye kuti, nekudaro, angangoda dzidziso yemunhu.
Inonyanya kubatsira kana mamwe mamiriro aya achifungidzirwa:
dyslexia (Matambudziko ekuverenga)
dysorthography (zviperengo zvinetso)
dyscalculia (matambudziko ekuverenga)
dysgraphia (zvinetso kugadzira kunyorwa kunonzwika)
ADHD (kutarisisa uye matambudziko ekumanikidza)
Plusdotation (huchenjeri hwakawanda kwazvo kupfuura zvakajairwa)
Anamnestic interview. Inguva yekuziva inoitirwa kuunganidza ruzivo rwakakodzera panhoroondo yemurwere. Chikamu ichi chinobatsira kuona dambudziko raigona kuitika uye chinopa chekutanga kudzamisa chikamu chekuongorora.
Kuongorora uye maitiro ekuongorora. Munguva yekuongorora, mwana (kana munhu mudiki) anozoitwa bvunzo dzinova nechinangwa chakazara chekuongorora mashandiro ekuita pamwe nekuita mukudzidza (semuenzaniso, danho rehungwaru, hunyanzvi hwekucherechedza, ndangariro, mutauro, kuwanikwa kwekuverenga, kunyora uye kuverenga).
Kugadziriswa kwemushumo uye kudzoka kubvunzurudza. Pakupera kwemaitiro ekuongorora, chirevo chichaumbwa chinopfupisa icho chakabuda muzvikamu zvakapfuura. Kupindira kwekupindira kuchave zvakare kutaurwa. Uyu mushumo uchaunzwa uye unotsanangurwa kuvabereki panguva yekudzokorora kubvunzurudza, kutsanangura mhedzisiro dzakasvika uye zvinotevera kupindirana mazano.
Chii chinogona kuitwa chinotevera?
Kubva pane zvakabuda muongororo, nzira dzakasiyana dzinogona kuitwa:
Kana paine dambudziko rekudzidza chairo. kubudikidza ne inoverenga 170 / 2010, chikoro chichafanirwa kuburitsa gwaro rakanzi Personalized Didactic Plan (PDP), maanenge aratidza zvishandiso uye zvekushandisa izvo zvaachazoshandisa kushandisa tsika kudzidzisa pamwana / mukomana kudzidza nzira (onawo zvakare DSA kuongororwa: zvekuita zvinotevera?).
Panyaya yehumwe hunhu, sekushushikana kwekutarisa, kunetseka kwekurangarira kana danho repamusoro soro, zvinogara zvichikwanisika kugadzira chirongwa chekudzidzisa chakasarudzika nekuda kwedenderedzwa revashumiri pa BES (Inokosha Dzidzo Zvinodiwa).
Zvakare, misangano ye kutaura Therapy kugadzirisa zvinhu zvine chekuita nemutauro kana kudzidza (kuverenga, kunyora uye kuverenga), neuropsychology makosi kukwidziridza kutarisisa uye kugona kwekuyeuka uye dzidzo yevabereki yekuwana nzira dzakakodzera dzekugadzirisa chero matambudziko emufambiro wemwana.